अबको चुनावमा विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि भोट हाल्न पाउने !!! – All About Remittance & Fintech
काठमाडौं – विदेशमा बस्ने नेपालीहरुका लागि खुशीको खबर छ, अबको चुनावमा विदेशबाटै मतदान गर्न पाउने वातावरण बन्दैछ । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेसँगै निर्वाचन आयोगले यसबारे छलफलको तयारी थालेको हो ।
Previous post सावधान !!! मलेसियामा अवैधानिक भएर बस्नुभएको त छैन ?
Next post राष्ट्र बैंकले गर्यो ‘जिनियस एक्सप्रेस रेमिट’ कम्पनी खारेज, पैसा लिनु पर्ने भए ३५ दिनको समय